Ungayiguqula kanjani i-Oneplus 2 yakho ibe iselula ye-Linux nge-Ubuntu Touch (elula) | Kusuka kuLinux
Ungayiguqula kanjani i-Oneplus 2 yakho ibe iselula ye-Linux nge-Ubuntu Touch (elula)
Isaka | | Android, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
I-UBports Foundation, isisekelo sokusiza saseJalimane ngemuva kwale phrojekthi, siyaqhubeka nokwenza ngcono isipiliyoni futhi senze kube lula kubasebenzisi abafisa ukufaka lolu hlelo lokusebenza lweselula kumadivayisi wabo we-Android. Ubufakazi balokhu obusha I-UBports Installer ye-Ubuntu Touch sebekhululile. Ngokuqondile, kuzoba lula kulabo abane-OnePlus 2, bakwazi ukuguqula lesi siginali sibe iselula yeLinux kalula.
Usuyazi nje ukuthi Ubuntu Touch kwakuwuhlelo lokusebenza lweselula oluthembisayo kakhulu, futhi lokho kuhlangana wonke umuntu ayekhuluma ngakho kwakungafika ngakho futhi lokho ekugcineni kubonakala sengathi kwawela ekukhohlweni. Ngeshwa, Abakwa-Canonical bayeke lo msebenzi eminyakeni eyedlule, kepha lesi sisekelo siyamukele futhi sayigcina iphila, kanye nokwenza ukufuduka kwe-iOS noma kwe-Android kube lula kakhulu.
Manje kukhona i-UBports Installer entsha noma i-Ubuntu Touch Installer ongafaka kuyo uhlelo lokusebenza ku noma iyiphi idivayisi esekelwayo ngomzamo omncane, ngaphandle kokuhambahamba ufaka ama-ROM amasha ngesandla futhi uzifaka engozini uma kukhona okungahambi kahle phakathi nenqubo nokuthi iba yinto engenamsebenzi ngoba awazi kahle ukuthi ungayenza kanjani.
Lesi sinyathelo singenziwa ngokunethezeka kwi-Windows PC yakho, i-MacOS noma i- kusuka ku-GNU / Linux. Awudingi ngisho nohlelo oluthile njengoba lusebenza kahle kulezi zingxenyekazi.
Kusukela inguqulo ye-UBports Installer 0.7.4-beta ekhishwe ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, kube nezinguquko ezinkulu nokuthuthuka. Okunye okuvelele kakhulu ukufaka i- Ama-Smartphones e-OnePlus 2 phakathi kohlu olusekelwayo. Ngakho-ke, uma unenye yalezi zinhlobo futhi ufuna ukuyinikeza impilo yesibili ngeLinux, ungalandela lezi zinyathelo ukufaka Ubuntu Touch kuyo kalula.
Esokuqala ukuthi landa inguqulo yakamuva ezinzile etholakalayo, okuyi-0.8.7 ngesikhathi sokubhala le ndatshana. Ukulanda inguqulo yakamuva lapho, mane ulandele lezi zinyathelo:
Finyelela leli kheli kuwebhusayithi esemthethweni.
Ephansi futhi chofoza inkinobho yephakheji ufuna ukulanda kusuka ku-UBports Installer, kungaba ngeWindows, MacOS noma ngeLinux distro yakho. Endabeni yeLinux, unamaphakeji we-DEB, i-Snap, noma i-AppImage universal package, noma yikuphi okuthandayo.
Lapho usulanda iphakheji, unga faka le phakheji njengoba ubungenza nganoma yiliphi elinye iphakethe lalezo zici. Ngokwesibonelo:
Ungavula i-DEB nge-Gdebi ukuyifaka imidwebo noma usebenzise umphathi wephakheji kulayini womyalo.
Nge-AppImage, yinike ikhiphe izimvume bese uyichofoza kabili kuyo.
Uma isifakiwe kwi-distro yakho, into elandelayo ukulandela lokhu ezinye izinyathelo:
Gijima Isifaki se-UBports.
Manje, xhuma i-OnePlus 2 yakho (icishiwe) ku-PC yakho ngekhebula USB.
Ku-UBports Installer, thepha Khetha Idivayisi ngesandla.
Ewindini elisha elivelayo, khetha iselula yakho ohlose ukufaka kuyo Ubuntu Touch nokuthi usanda kuxhuma, kulokhu I-OnePlus 2.
Manje, esikrinini esilandelayo, ungashiya idatha njengoba injalo noma ushintshe isiteshi, okungukuthi, i-OTA ozofaka noma uguqule. Isibonelo, i-OTA-15 noma enye inguqulo entsha uma uthanda.
Lapho usuqedile ukwenza izinguquko ozifunayo, cindezela ukufaka ukufaka uhlelo.
Ikuthumelela umyalezo wokuxwayisa, kufanele Qhubeka ukuqhubeka
Izokucela i iphasiwedi umphathi wesistimu yakho okufanele ungene ukuze uqhubeke.
Qhafaza OK ukulandela.
Manje, cindezela inkinobho yamandla imizuzwana embalwa uze ubone isikrini sokuqala.
Uzobona ukuthi umyalezo uvela esikrinini sakho se-PC okufanele uwenze yamukela.
Uma konke kuhambe kahle, uzobona ukuthi izikrini ezahlukahlukene zivela kanjani ku-OnePlus 2 yakho naku-UBports Installer. Awudingi ukwenza noma yini, nje ukulinda.
Ngemuva kwalokho i-OnePlus 2 yakho iqala kabusha nesikrini sokulayisha se- Ubuntu Thinta.
Manje kufanele ujabulele i-Ubuntu Touch yakho ku-terminal yakho ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayiguqula kanjani i-Oneplus 2 yakho ibe iselula ye-Linux nge-Ubuntu Touch (elula)
Sawubona, ngikwenzile ukufakwa njengoba kuchazwe ngenhla ku-One Plus 2 smartphone evela kwi-laptop ene-Arch Linux futhi ukufakwa kube lula kakhulu futhi kushesha ngokweqile.
Ngiyabonga ngale ndatshana
I-PeerTube 3.1 ifika ngokuthuthuka kokufaka ikhodi, isikhombimsebenzisi nokuningi